टिमुरको अचारले फेरिएको जीवन:: Artha Dabali
टिमुरको अचारले फेरिएको जीवन
आत्मविश्वासले उठेको व्यवसायः नेपाली मन उद्योग
नागरिक समाजबाट सफल उद्यमीको प्रमाणपत्र प्राप्त महिला उद्यमी बसुमाया तामाङ एक सफल उद्यमी हुन् । २०४६ /०४७ सालमा कम्पनी स्थापना गरेर अघि बढेकी तमाङको अहिले ३७ जनाबढि रोजगार छन् । हिजो उनले गरेका संघर्षको प्रतिफल भएको उनी बताउँछिन् ।
मान्छेलाई धेरै कुरा दुःखले सिकाउने रहेछ र दुःखको सबैभन्दा ठूलो औषधि धैर्यता रहेछ । यहाँसम्म आउनका लागि मैले निकै ठूलो सङ्घर्ष गरेँ । ती दुःखका दिनहरु मेरो मनसपटलमा आजसम्म ताजै छन् । म कामलाई ठूलो र सानो ठान्दिन । बाँच्नका लागि मैले बालुवा चाल्ने, मैनबत्ती बनाउने, चर्खा काट्ने सबै काम गरेकी छु । यसरी काम गर्ने क्रममा मैले ठेलागाडा राखेर सडकमा मःम, चप, सेकुवा, ससेज आलुफ्राई पनि बेचेँ । मःम र ससेजसँग दिएको टिमुरको अचार ग्राहकहरुले निकै रुचाए । यसरी अचारको स्वादले नै मेरो जीवनले नयाँ मोड लियो
टिमुरको छोप जुन, गाउँघरमा आलु र ढिडोसँग खाइन्छ । मैले पाहुना, आफन्त साथीभाई जो आउँदा पनि छोप चाख्न दिन्थे । उहाँहरुले तारिफ गर्नुहुन्थ्यो र घरमा लैजानको लागि माग गर्नुहुन्थ्यो । सानो उमेरदेखि लगनशिल भएकोले पनि म गाह्रो नमानी सकेको बनाएर उनीहरुलाई दिने गरेकी थिएँ । यसरी नै विस्तारै मैले अचारलाई व्यवसायिक रुपमा अघि बढाएकी हुँ ।
लगानीभन्दा ठूलो धैर्यता र मेहनतमसँग लगानीको लागि प्रशस्त पैसा थिएन । जम्मा पारेर राखेको १२ सयको नुन, खुर्सानी, लसुन र टिमुर ओखल र सिलौटामा पिसेर मैले अचार बनाए । त्यतिबेला मसँग न व्यवसाय गर्ने सीप थियो न बजारको ज्ञान नै । चम्चाले नापेर सानो प्लाष्टिकको ५० र ठूलो प्लाष्टिकको ८० रुपैँया मूल्य तोकेर अचार बेच्न शुरु गरेका ती दिनहरु मेरा लागि अवस्मरणिय छन् । यो अचार बेच्न तीन महिना लाग्यो । जसबाट मैले पाँच हजार कमाए । घरको आँगनबाट शुरु गरेको व्यवसायले मलाई व्यवसायिक हुन सिकायो । म अत्यन्त उत्साहित भएँ । त्यसपछि अचारको माग बढ्न थाल्यो दुई किलो, पाँच किलो, दश किलो, बीस किलो गर्दै लगानी पनि बढाउदै गएँ । एकातिर बीस किलो खुर्सानीको बोरा देख्दा, अहो ! यति धेरै कहिले बनाउने ? कहिले बेचिसक्ने ? जस्तो लाग्थ्यो भने अर्कोतिर बीस किलो खुर्सानीको अचार बनाउने भइसके भनेर आफैँसँग गर्व महसुस गर्थे । यसरी बनाएको अचार विक्री हुन महिनौ कुनुपथ्र्यो । परिवारको पनि मैले सहयोग पाएँ । ठाउँ–ठाउँमा लगेर किनिदिन अनुरोध पनि गर्थे । अचारको स्वादको कारणले नै व्यवसायमा विस्तारै वृद्धि र विस्तार हुदैँ गयो ।
कामले नै काम सिकायो
म सानैदेखि जाँगरिलो र आँटिलो थिएँ । मलाई सम्झना छ, प्लाष्टिकमा छोप बोकेर बेच्नको लागि भाटभटेनी गएकी थिएँ । तर भाटभटेनीले यसरी खुल्ला रुपमा ल्याएको, लेभल, भ्याट, दर्ता, कम्पनी केहि छैन भनेर लिन मानेन । यो घटनाले मेरो चेत खुल्यो । अहो ! कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने रैछ भन्ने बुझँे । त्यसपछि भने पैसा जुटाएर एक/डेढ महिना लगाएर कम्पनी ‘नेपाली मन छोप उद्योग’ दर्ता गरेँ । र त्यसपछि अचारलाई पनि बोतलमा भर्ने लगायतका सबै काम गरेर मापदण्ड पु¥याए । त्यसपछि फेरि म भाटभेटेनी गएँ । धेरै पटक धाउँदा पनि मैले भाटभटेनीको प्रमुखलाई भेट्न नसकेपछि मलै जे गर्छु आफैँ गर्छु भनेर भाटभटेनी धाउनै छोडेँ । २०६९ सालबाट शुरु गरेको व्यवसाय आजको अवस्थामा मैले आफ्नै हिम्मत र आँटले ल्याइपु¥याएकी हुँ ।
आजसम्म मैले कुनै पनि पसलमा गएर मैले सामान बेचेको छैन । केहि पसलहरुले भने माग गरेर बेचिरहेका छन् । मेला तथा प्रदर्शनीहरुमा सहभागिता सकेसम्म छुटाउदिन । म अचारको बारेमा धेरै बोल्दिन बसः अचार चाख्न दिन्छु बाँकी यसको स्वादले नै बोल्छ । नेपालमा दिनानुदिन लोकप्रिय बनेको यो अहिले अचार जापान, यु.के., अष्ट्रेलिया जर्मनी लगायत २१ वटा देशमा निर्यात भइरहेको छ । पछिल्लो समय न्युजिल्याण्डमा निर्यातको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने जापान र अमेरिकामा मैले आफ्नै नाममा कम्पनी दर्ता गरेर जाने योजनामा बनाएकी छु ।
अचारको स्वादले नाम र दाम कमाएँ
शुरुमा टिमुरको छोपको मात्रै अचार बनाउँथे तर अहिले डल्ले खुर्सानी, माछा र मासुको अचार पनि माग बढेको हुँदा उत्पादनको दायरा बढाएकी छु । एक वोतल छोपको मूल्य दुई सय पचास रुपैँयादेखि दुई सय ८० सम्म पर्छ भने एकै दिन ३७ हजारसम्मको व्यापार गरेको अनुभव मसँग छ । बार्षिक करिव ५०/६० लाखसम्म मैले कारोबार गरिरहेकी छु । यसैबाट कमाएर करिव चार लाख मैले यहि उद्योगमा लगानी गरेकी छु भने अहिले मेरो अचार उद्योगमा १४ जनासम्मले रोजगारी पाइरहेका छन् ।
ती कहाली लाग्दा दिन यि सुखका यादहरुः
त्यस्तै, म सामाजिक कामहरुमा पनि संलग्न भएकी छु । एच आइभी पोजेटिभ बच्चाहरुकाहरुको लालनपालन तथा हेरचाहमा जाने गर्दछु । साथै बर्षमा १/२ चोटी अनाथ बालबालिकालाई खाना खुवाउइरहेकी छु । उनीहरुलाई जे कुरा खान मन छ त्यो कुरा सोधेर लगेर खुवाउने गरेकी छु । ती बालवालिकाहरुलाई देख्दा मलाई आफ्नो बाल्यकालको सम्झना आउँछ । म परिवारकी जेठो सन्तान मभन्दा साना तीन जना भाइहरु वुवा इन्डियन आर्मी हुनुहुन्थ्यो । म सानै उमेरमा काठमाडौं आएँ ।’ उनले आर्मीको जागिर र धादिङ (घर) छोडेर हामीलाई २०३५ सालमा काठमाडौंको सोह्रखुट्टे ल्याए । त्यतिबेला म दश वर्षको थिएँ । वुवाआमालाई होटल र घरको काममा सघाउदैँ मैले दश कक्षा पास गरेँ । २०४८ सालतिर स्कुल बिदा हुँदा घर र होटलको कामसँगसँगै मोजा पट्याउने तथा चर्खाबाट धागो निकाल्ने काम गरेर पैसा कमाउथे । वुवाको मृत्यु भइसकेपछि भने मेरो काँधमा घरको जिम्मेवारी आयो । घर चलाउन धौ–धौ भयो । बल्लतल्ल पद्मकन्याबाट उनले आईए पास गरेँ त्यसपछि भने पढाइमा पूर्णविराम लाग्यो ।
एकल जीवनमा आएको नयाँ गोरेटोः
कहाली लाग्दो जीवन केहि सहज हुन्छ कि जस्तो लागेर विवाह गरेँ । तर, विवाह लामोसमयसम्म टिक्न सकेन । तर पनि मैले हरेस खाइन । दुई सन्तान च्यापेर हिडेँपछि मेरो जीन्दगीले पुनः अर्को मोड लियो । कहाँ जाने ? के खाने ? के गर्ने ? कहाँ बस्ने ? थाहा थिएन तर पनि मसँग सबैभन्दा बलियो आत्मशक्ति र दृढता थियो । सहयोगको लागि अड्डा अदालत र विभिन्न सरकारी तथा नीजि संघ संस्थाहरु पनि नधाएको होइन तर कसैले मलाई सुनेनन् । कुनै दिन यस्ता पनि आए मैले आफ्नो सन्तानलाई खाजा माग्दा खाजा नदिन सक्ने अवस्थामा पनि थिएँ । नुन मात्र भएको तरकारी पनि खुवाए । त्यसैले कुनैपनि बालवालिकाहरुले यो दुःख भोग्न नपरोस् । उनीहरुले पनि जीवनमा केही गर्नु सकुन् भन्ने मेरो अपेक्षा हो ।
अचारले चिनिएकी छु । र यो समाज अचारले नै बुझ्न सकेँ । देशभर अचारको माग छ । हामीले यति मात्र गर्न सके आय आर्जनको मेलो होइन पुरै आर्थिक परिवर्तन गर्न पनि सक्छौं । तर, राज्यले महिलाहरुका लागि यस्तो उद्यमी गर्न सहज बातावरण तयार गर्दै साहयोग गर्नुृ पर्दछ ।
प्रस्तुती: मञ्जिला बस्नेत